Akụrụngwa nke ọrụ a dị mgbagwoju anya. A na-agwakọta ihe anọ nke shale, kol gangue, cinder na ụrọ iji mee brik. Ha na-nri dị iche iche site na anọigbe ndị na-eri nri, ha na-akụpịa hammering n'otu oge ahụ. Mgbe ahụ, a na-enyocha ha site na ngebichi abụọ na-agagharị na ihe na-adịghị mma ka a laghachi n'ime hama maka ịkụcha ihe. Ihe ndị dị mma na-abanye n'ime igwekota okpukpu abụọ ma jikọta ya na mmiri, wee zigara ụlọ nkwakọba ihe nke mere agadi site na eriri ebu. Ngwa ndị ahụ emeela agadi n'ụlọ nkwakọba ihe ma banye n'ime ụlọ ọrụ ịkpụ brik. Mgbe emebisị site na igwe na-agba okpukpu abụọ ọzọ, wee banye na igwekota na mmiri na-agwakọta, wee mechaa gbanye ya na onye na-ekpofu ihe na-agbaji okpukpu abụọ, a na-emepụta eriri apịtị site na onye na-ekpo ọkụ na-ekpochapu ya ma na-egbutu ibe na mpempe akwụkwọ maka nchịkọta, 2 ígwè ọrụ ntanetị na-atụkwasị na ụgbọ ala.
Ihe oru ngo a bu usoro ihe eji eme brik site na nhazi otutu ihe. A na-echi ụdị ihe anọ dị iche iche ma mee agadi iji mee brik. Usoro a dị mfe ma ego itinye ego dị ala. Warelọ nkwakọba ihe nke na-aka nká bụ ụlọ nkwakọba ihe nke otu ụzọ maka ndị na-egwupụta ọtụtụ bọket. Ọ nwere obere mpaghara ma nwee nkwado dị elu maka ọrụ ndị nwere oke ala.
Oru ngo ọwara n'ekwú ọkụ na cross-ngalaba nke 7.2m, otu Ọwara maka mmiri na otu maka ọkụ, na-arụpụta kwa afọ nke 160-180 nde iberibe (nke ya na brik ọkọlọtọ nke China).